विदेशको तुलनामा नेपालको क्वालिटी अझै पछाडि नै छः सरोज थापा Kasthamandap Daily
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका ३ मुलपानीमा बुवा नारायण थापा र आमा चिनकुमारी थापाको कोखबाट मध्यम परिवारमा २०३९ पुष ३ गते जन्मेका हुन् सरोज थापा । गाउँकै महेन्द्रोदय स्कुलबाट माध्यमिक तहको अध्ययन सकेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं आएका उनी गाउँमा सबैका प्यारा थिए । पढाइमा जहिले पनि प्रथम, द्वितीय हुने उनलाई शिक्षक शिक्षिकाहरुले धेरै माया गर्दथे ।
पढाइमा मात्र सफल होइन उनले गाउँमा रहँदा समाजसेवा पनि गरे ।कहिले आफ्नै हातले मुर्ती कुदेर मन्दिर बनाए त कहिले के गरे । सीपका धनी भएकाले उनलाई खालि बस्न पनि मन लाग्दैनथ्यो । स्कुले जीवनमा हस्तकला र चित्रकलामा बिरेन्द्र सिल्ड पनि जिते । उनको त्यतिबेलादेखि चञ्चलता र सिर्जना अहिले विश्व चर्चित पेस्ट्री सेफका रुपमा स्थापित भएको छ । बाल्यकालदेखि नै कलामा सौखिन भएका कारण नै उनलाई यो पेशामा आउन प्रेरित ग¥यो । २०५४ सालमा एस्एल्सी पूरा गर्नसाथ काठमाडौं छिरेका उनी सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसमा रातीको सिफ्टमा भर्ना भए अनि उनको संघर्षका दिन सुरु भए । दिउँसो आफ्नै भिनाजुको पसलमा काम सघाउने र रातमा क्याम्पस पढ्ने गरेर उनले आइए सके र कालिमाटीको एक आइसक्रिम सपमा काम पाए । पर्यटन र होटल सम्वन्धीको नेपाल एकेडेमी कलेजमा कुलिनरीमा डिप्लोमा पनि पूरा गरी सांग्रिला होटलमा ‘ईन्टर्नसीप’थाले । त्यहाँ काम गर्ने क्रममा एक फ्रान्सेली पाहुनाले उनको दक्षता देखेर निकै प्रसंशा गरे र तुरुन्तै उनले त्यहीँ स्थायी रुपमा जागिर पाए । यो नै उनको जीवनको उचाइको एउटा पहिलो बाटो थियो ।उनी यो दिन र घटनालाई अहिले पनि बेलाबेला सम्झन्छन् ।
उनी दाई (साहिलो बुबाको छोरा) रण बहादुर थापाको सहायताले पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीको रुपमा सयाम्स होटल अबुदाबी पुगे । उनले नेपालमा सिकेको सीप र आफ्नो क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गरेर देखाए । उनी अझैपनि वैदेशिक यात्रामा नै छन् । उनको शालीनता, दक्षता, इमानदारिता र दक्ष लिडरसिपका कारण दर्जनभन्दा बढी पाँचतारे होटल र अबुदाबीदेखी युरोपका फ्रान्स लगायत कैयौं तारे होटलहरुमा आफ्नो दक्षता देखाउने थप अवसर पाए । यही पेशाबाट उनले पाएका दर्जनांै गोल्ड मेडल र प्रमाणपत्रले अहिले उनको कलंकीको घरका कोठा सजिएका छन् । उनको दक्षताको कदर गर्दै पेशागत संस्था वल्ड सेफ एसोसिएसन सोसाइटीले आजीवन सदस्यता दिएको छ । यो कदर पाएपछि उनी हरेक वर्ष युरोपका देशहरु जानैपर्ने हुन्छ । यो सफलता हासिल गर्नुको पछाडि जिवन संगिनी बुनु खड्काको विशेष भूमिका रहेको उनले बताए । खड्काले पनि सरोजको कामकै सिलसिलामा धेरै देश घुम्ने अवसर पाएकी छिन् । उनले पाएको सफलताको विषयमा काष्ठमण्डप डेलीले गरेको समसामयिक कुराकानी–
अहिले तपाईं कुन होटलमा आवद्ध हुनुहुन्छ र तपाईंको जिम्मेवारी के हो ?
अहिले म म्यारिएट होटल इन्टरनेशनल पेस्ट्री सेफको रुपमा काम गर्दैछु । मेरो जिम्मेवारी भनेको क्वालिटी प्रडक्ट, कस्ट कन्ट्रोल, नयाँ मेनु सेटअपसँगै रेसेपी बनाउने, बेकरी र पेस्ट्री टिम सम्हाल्ने, डिउटी सिफ्ट हेर्ने, क्वालिटी चेक गर्ने हो । त्यस्तै फूड कस्ट सन्तुलन हेर्नु, नयाँ स्टाफलाई तालिम दिनु , पुरानालाई अपग्रेट गर्नु, नयाँ नयाँ प्रोडक्टको इनोभेसन गर्नु अर्को जिम्मेवारी हो । फुड फेस्टिभल, ईभेन्ट र विभिन्न देशमा हुने फुड प्रतियोगिता समावेश हुनुको साथै आफ्ना टिममा राम्रा राम्रा कामदारलाई छान्ने जस्ता जिम्मेवारी पनि सम्हालेको छु । गेस्टको कम्प्लेन सल्भ गर्ने जस्ता गहन जिम्मेवारी पनि मैले नै हेर्नुपर्छ । एक्जुकेटिभ सेफ र मेनेजमेन्टसँग को–अर्डिनेसन गरेर काम गर्नुपर्छ । कुनैकुनै कम्पनी या होटलमा त होटलको साहुसँग बसेर नै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण होटल राम्रो हुन्छ भने सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट पार्न पनि सकिन्छ ।
तपाईंले त नेपालमा राम्रो होटलमा पनि काम पाउनुभएको थियो, किन एक्कासी विदेशिनुभयो ?
केही नयाँ कुरा सिकौ र बुबालाई फाइनेन्सेली सपोर्ट गरेर राजधानीमा एउटा घर बनाउनुपर्छ भन्ने मनसायले म विदेशिएको हुँ । मेहनत र परिश्रम गरे अनुसार सफल पनि भएँ र बुबाको ईच्छा पूरा गरेर छोडें । गाउँमा जन्मेको हुर्केको हुनाले शहरमा अलिक सहज हुन्छ भनी घर बनाउने उद्येश्य थियो जुन् पूरा भएकोमा खुशी लागेको छ । काठमाडौंका कलंकीमा घर बनाएर स्थायी रुपमा परिवारलाई त्यहीँ राखेको छु र कहिलेकाँही म पनि बस्छु, कामको सिलसिलामा धेरैजसो समय त विदेशमा नै बित्छ । घर बस्न पाउँदा साह्रै आनन्द लाग्छ । आफू जन्मेको गाउँ र दुःखी असाहयहरुलाई केही हिस्सा सहयोग गर्न पाएको छु त्यसमा पनि म खुशी छु ।
नेपाल र विदेशमा काम गर्ने शैलीमा के भिन्नता पाउनुभयो ?
विदेशमा विभिन्न देशका कामदार हुने हुँदा धेरै सिक्ने मौका पाईन्छ र सिकाइन्छ पनि । हरेक देशको आफ्नै कुजिन र त्यसको आ–आफ्नै विशेषता हुने हुँदा धेरै कुराहरु एक आपसमा शेयर गर्ने मौका पाईन्छ । विदेशमा पेस्ट्रीलाई चाहिने सम्पूर्ण समान उपलब्ध हुने हुँदा क्वालिटी उत्पादन हुन्छ त्यसमा पनि यो पेस्ट्री बेकरी भन्ने नै विदेशी भएका कारण नेपाल र विदेशमा धेरै भिन्न हुन्छ ।
तपाईं त एक जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्नुभएको छ, भिन्नभिन्न देशका कामदारलाई काम लगाउन कत्तिको गाह्रो छ ?
गाह्रो त हुन्छ नि, एउटै घरको दाजुभाईपनि मिलेर सँगै बसेका कमै हुन्छन् । अझ त्यसमा पनि कुन् देशका को को ती सबैको विचार र भावना पनि एक हुँदैन । सँगै काम गर्दा केही भिन्नता हुन्छ तर मैले सकेसम्म म्यानेज गरेको छु ।विभिन्न भाषा, कल्चरबाट आएका स्टाफहरुको फरक सोचाई र क्षमता हुन्छ तसर्थ उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर काम गर्नुपर्छ र कार्य विभाजन पनि गरिदिनुपर्छ । कसैलाई देश, जात र रङका आधारमा भेदभाव नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्न पनि सिकेको छु ।
विदेश पेस्ट्री सेफको जिम्मेवारीहरु के के हुँदा रहेछन्? त्यति ठूलो टिमलाई कसरी समान रुपमा व्यवहार गर्न सम्भव हुन्छ र ?
विदेश होस् या स्वदेश जहाँ भएता पनि इन्टरनेशनल फ्रेन्चाइज होटलहरुमा एउटै हो । नेपालको तुलनामा विदेशमा धेरै देशका कामदार साथमा लिएर काम गर्नुपर्छ । हामीले सही रेसेपी फलो गरेको छ कि छैन, खानाको क्वालिटी राम्रो छ कि छैन भनेर बेलाबेलामा टेस्ट गर्ने, खानाको स्तर सधैं एकनासको राख्न बेलाबेलामा तालिम दिने, फुड कस्ट बजेट अनुसार क्वालिटीलाई असर नपर्ने गरी सन्तुलनमा राख्नेजस्ता विविध काम हेर्ने हो । एउटा सच्चा ‘लिडरसीप’ भन्नाले सबैलाई सन्तुलनमा राखेर चित्त बुझाएर राख्नु हो त्यो गर्न सकेमा मात्र टिममा ‘सार्पनेस’ र ‘वर्क स्प्रीट’ हुन्छ ।
विदेशमा तपाइले त दर्जनौ पाँचतारे र डिलक्स होटलहरुमा काम गरिसक्नुभयो अब फर्किएर नेपालमा बस्ने कुनै योजना छ कि छैन ?
आफ्नो प्यारो गाउँठाउँ छोडेर लामो समयसम्म विदेश बस्ने कसैलाई रहर हुँदैन । म पनि बाध्य भएर मात्र विदेशिएको हो, घर परिवार, साथीभाई र गाउँलेको सधैं याद आइरहन्छ । राम्रो अवसर पाए नेपालमा नै बस्ने सोच छ तर अहिलेको यो स्थितिमा विदेशमै धेरै राम्रा अवसर आइरहेका छन् ।तर यहाँ जेजस्तो मौका आए पनि केही समयपछि भने नेपालमै फर्केर केही गर्ने सोच बनाएको छु ।
सानो उमेरमा यति गहन जिम्मेवारी सम्हालेर काम गरिरहनुभएको छ अलिकति कठिन त होला नि?
म २४ बर्षको उमेरमै सुपरभाइजर लेबल (सेफ डि पार्टी) भएर काम गरिसकेको मान्छे हुँ । शुरुमा त केही कठिन महसुस हुन्थ्यो तर अहिले त धेरै होटल परिवर्तन गरेर धेरै देशमा काम गरेको अनुभव भयो त्यसैले पनि खासै गाह्रो लाग्दैन । मलाई कामले नै काम सिकाएको छ, यसमा गर्व गर्छु ।
तपाईं त कुलिनरीको सर्वोच्च सस्था (वल्र्ड सेफ एसोसिएसन) को निर्णायक पदसम्म पुग्नुभएको छ, युरोपियनहरुको साथमा बसेर काम गर्न र निष्पक्ष निर्णय गर्न सम्भव छ र ?
यो ठाउँमा पुग्ने चाहना मेरो मात्र होइन विश्वभरका सबै सेफहरुको हुन्छ । ढिलै भए पनि यो सफलता चुम्ने मौका पाएकोमा खुशी लाग्छ । सम्भवत पेस्ट्री सेफहरुमा यो निर्णायक पदमा पुग्ने पहिलो नेपाली म नै हुँ । पूर्ण रुपमा वल्ड सेफ एसोसिएसनका सिनियर सेफहरुले तालिम दिने र उहाँहरुकै गाइडलाइन अनुसार काम गर्ने हुँदा खासै गाह्रो हुन्न । अहिलेसम्म सहज रुपमा काम गरिराखेको छु, हरेक वर्ष मलाई युरोप बोलाइन्छ र जान्छु । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर फर्कन्छु ।
विश्वको धेरै देशमा पुगेर एक जिम्मेवार पदमा रहेर काम गर्नुभयो तपाईजस्तो सीप भएको मान्छेलाई नेपालमा पनि राम्रो अवसर छ नि होइन ?
अवसर त धेरै पाएको छु तर पनि मैले विदेशमा जुन स्तरमा बेकरी र पेस्ट्री उत्पादन गरेको छु त्यो नेपालमा गर्न सम्भव छैन जस्तो लाग्छ किनकि पर्याप्त पेस्ट्री र बेकरीलाई चाहिने सामग्री पाइन्न । केही समयपछि नेपालमा पनि विदेशको जस्तो स्तरीय उत्पादन निकाल्न सकिन्छ । विदेशमाधेरै वर्ष काम गरेका सेफहरु अहिले नेपालमा काम गर्न थालेका छन् धेरै इन्टरनेशनल होटलहरु धमाधम खुलेका छन् । स्तरीय सामानहरु महंगै भएता पनि विदेशबाट झिकाउनुपर्ने हुन्छ, जसले होटलको स्तरलाई उकास्न मद्दत पु¥याउँछ ।
नेपाल फर्कनु भएपछि तपाईंको मुख्य योजनाहरु के के हुने छन् ? जागिर खानुहुन्छ कि आफ्नै व्यवसाय?
पहिलो त आफ्नै व्यवसाय गर्ने हो । एउटा राम्रो पेस्ट्री बेकरी स्टुडियो खोलेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर स्वदेश तथा विदेशमा खपत गराउने योजना छ । मैले नेपालका धेरै होटलहरुमा घुमेर बेकरी तथा पेस्ट्रीको स्तर हेरें, खासै राम्रो लागेन शायद सामग्री नपाएर पनि होला । विदेशको तुलनामा नेपालको क्वालिटी अझै पछाडि नै छ ।
तपाई यो सफलताको प्रमुख श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
यसमा पहिलो श्रेय त मलाई जन्म दिने आमा बुवालाई नै दिन्छु । उहाँहरुले पढाई लेखाई गराएर यहाँसम्म पुग्ने बनाउनुभयो । मेरा दिदीहरु जसले मलाई धेरै माया गरेर हुर्काउनुभयो अनि यो ठाउँसम्म पुग्नमा मेरो जीवनसंगिनीको पनि ठूलो हात छ साथै मेरा आफन्त र शुभचिन्तक साथीभाइहरु जसले सपोर्ट गरेर मलाई यहाँसम्म पुग्न योग्य बनाइ दिनुभयो ।अनि मेरा जर्मनी र फ्रेन्च सेफहरु प्नि धन्यवादका पात्र छन् जसले मलाई धेरै सीप सिकाएर यहाँसम्मको दक्ष बनाइदिए ।
नेपाली सेफहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? यो पेशामा आउन चाहानेलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
नेपालमा पनि धेरै ईन्टरनेशनल होटलहरु खोलेका छन् र खुल्ने क्रममा पनि छन् । नव आगन्तुक सेफहरुको भविष्य राम्रो छ । ईमान्दार, विश्वासी र परिश्रमी हुनु प¥यो । नयाँ नयाँ कुलिनरीका टेर्निङ सेन्टर र होटल मेनेजमेन्ट कलेजहरु खुलेका छन् । राम्रा राम्रा सेफहरु नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँहरुबाट पनि धेरै कुरा सिक्नुप¥यो । धेरै विधामा लागेर मन नडुलाई एकै पेशामा दत्तचित्त भएर लाग्नुभयो भने एक सफल सेफ बन्न सकिन्छ । समयको महत्वलाई बुझेर अघि बढ्नु पर्दछ, जुनसुकै पेशामा पनि भविष्य छ । आफू जहाँ र जुन् ठाउँमा भए पनि सिनियरलाई सम्मान र जुनियरलाई माया गर्न कहिले पनि भुल्नु हुँदैन ।
काठमाडौँ । नेपाली टेलिकमका क्षेत्रमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएको नेपाल टेलिकमका ...
सूर्यबहादुर घिमिरे, केन्द्रीय सदस्य, राप्रपा सूर्यबहादुर घिमिरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र ...
प्रशस्त बजेट अभाबको कारण माग भएका योजनाहरु सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको छ
निशान्त शर्मा बाँस्तोला स्थानिय सरकारको गठन पछि देशै भरिका स्थानिय सरकार प्रमुखहरु ...
नेपाली जनतामा खुशी ल्याउँछौं
–सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद ...
–विशेष प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भियतनाम ...
बिवाद रहित पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान बनाउनुपर्छः दुर्गादत्त ढकाल
को हुनुहुन्छ दुर्गादत्त ढकाल ? स्याङ्जा जिल्लमा जन्मिनुभई लामो समय नेपालको प्रशासनिक ...
“हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन”: प्रधानमन्त्री
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, ...
कतैबाट हामीलाई कमजोर पार्ने कोशिश भएका छन्ः प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष अन्तर्वार्ता
संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गरी तीनै तहको निर्वाचन गरेर नयाँ सरकार गठन भएको सात महिना ...
सरकारले देखिने गरी ठूला परियोजना ल्याउनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा (अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना ...